Eran-tany momba ny làlan-dalamby lalamby any Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Eran-tany momba ny làlan-dalamby lalamby any Europe
Mino mafy isika fa rail Tsidika dia iray amin'ireo tsara indrindra sy betsaka fomba ifanakalozana ho an'ny tontolo iainana. Noho izany, efa nifanelanelana teo ho eo izahay samy mpikatroka lamasinina samihafa mba hitondra anao ny tapakila fiaran-dalamby sy mora indrindra indrindra manerana an'i Eoropa. Midika izany fa afaka manolotra safidy anao an-jatony izahay manerana ny sarintany misy ny lalamby.
Avy any Eurostar haingam-pandeha ambony fiaran-dalamby mahatalanjona lalana, dia mandany ny fotoana rehetra mahita ny tsara indrindra vidin-javatra ka tsy manana ny. Noho izany, namorona lahatsoratra torolalana momba ny sarintany fiaran-dalamby izahay nanoro anao ny sasany amin'ireo làlamby malaza indrindra nataontsika. Anisan'izany ny dia avy any London mankany Paris, Florence ho any Roma, ary na aiza na aiza ao amin'ny eo.
Raha tsy hitanao eto ny tobinao – aza manahy! Ny fiaraha-miasa mamela antsika hahita anareo tapakila amin'ny fiarandalamby hafa isan-karazany ny andalana – lalana an-toerana, fifandraisana iraisam-pirenena, ary ny tsara indrindra amin'ny dia fitsangatsanganana avo lenta dia tafiditra ao daholo.
Dia hahazo aingam-panahy ny tenanao diany sasany, ary rehefa vonona ianao, mitodi-doha mankany amin'ny pejin'ny fikarohana hitadiavana ny tapakila fiaran-dalamby mora indrindra sy mora indrindra!
Ny sarintany misy ny sarintany misy anay amin'ireo làlanay malaza indrindra:
1. Fiaran-dalamby ao London St Pancras International mankany Paris
Ny fiaran-dalamby izay miainga avy any London mankany Paris dia iray amin'ireo haingana indrindra any Eoropa. Nosoratan'i Eurostar, azonao atao ny maka ny tenanao avy any Royaume-Uni ka hatrany Frantsa ao anatin'ny roa ora sy enina ambin'ny folo minitra fotsiny. Izany dia manome anao mihoatra ny fotoana ampy matory ao, handray ny fiaran-dalamby, ary mankafy a fitsangatsanganana andro any an-drenivohitra frantsay. Ento kitapo sy mandifotra ny Louvre – na mankafy fotsiny ny hatsarana rehetra atolotry ny Paris.
Mivoaka tsy tapaka ny fialan'i London St Pancras, miaraka amin'ireo lamasinina mihazakazaka isan'ora. Toy izany koa no azo lazaina momba ny fiverenany avy any Paris mankany London, ary eo ambonin'ny sambo ianao dia hahita ireo fitaovana ambony rehetra andrasana amin'ny làlamby farany.
Raha toa ianao mipetraka any Paris, afaka mandeha amin'ny lalana mifanohitra ihany koa ianao, izay ho tonga any London ianao ny maraina raha maniry ianao. Afaka miakatra ao SoHo ianao ary hanao fampisehoana Broadway na hankafizanao fotsiny ny saran-dàlana pub. Na izany na tsia, ny lamasinina dia manolotra fanamorana farany amin'ny fotoana fandaozana.
2. Lamasinina avy any Florence mankany Roma Termini
Roa amin'ireo tanàna ambony any Italia, Florence sy Roma no fonenan'ireo an-jatony manintona mpizaha tany ho an'ny karazana mpitsidika rehetra. Afaka mamakivaky ny Vatican ny kianja any amin'ny Ilay trano fiangonana. Ny sakafo dia afaka mankafy ny sasantsasany amin'ny mozaraela fala-daza indrindra. Na inona na inona tsirony, ireo roa ireo Zavatra tanàna dia toerana mahafinaritra handany herinandro na dimy.
Tsara kokoa, Ny fiaran-dalamby mampifandray an'i Florence sy Roma dia betsaka sy tsy lafo. Naharitra adiny iray sy sasany monja ny dia ary nahazo bonus fanampiny tsara tarehy any ambanivohitra ianao.
3. Sarintany misy lalana: Lamasinina avy any Roma mankany Milan
Efa niresaka momba an'i Roma izahay, fa Milan kosa tanàna hafa mahafinaritra any Italia. Tsy mitovy amin'ny atsimon'i Italia toy ny paoma ny voasary, Milana maoderina i Milan. Fantatra noho ny fodiana avo lenta sy avo lenta, fijanonana ny tanàna mandritra ny fialan-tsasatra italiana. Na dia tsy mitovy amin'ny Mediterane aza ny toetr'andro, mbola afaka mankafy ny maritrano tsara tarehy ary na tranom-bakoka na roa isaky ny taona.
Ny dia avy any Roma mankany Milan dia lava noho ny an'i Florence. Tsy mila matahotra, na izany aza, mbola afaka adiny telo sy sasany mahery be izany. Manome fotoana bebe kokoa anao fotsiny izany mankafy ny toerana manodidina!
Tapakila Genoa mankany Milan
Roma ho an'ny tapakila Milan
Tapakila Bologna mankany Milan
Tapakila Florence ho any Milan
4. Lamasinina avy any Hamburg mankany Copenhagen
Tsy maintsy fialan-tsasatra Eropeana, Hamburg, ary mety tsy i Copenhague no tanàna voalohany tonga ao an-tsainao momba ny fizahantany. Henatra be izany, anefa, satria samy manana tantara sy lakan-kano marefo ireo tanàna roa ireo. Hamburg dia tanàna lehibe seranan-tsambo any avaratr'i Alemaina. Mety efa naheno an'izany teo aloha ianao noho ny fifandraisany amin'ny sakafo malaza malaza hamburgers. Fun zava-misy – ny olona monina ao Hamburg dia antsoina koa hoe Hamburgers.
Copenhagen, etsy ankilany, dia renivohitr'i Danemark. Raha te-hitsidika ao amin'ny fahavaratra na toetrandro matevina, betsaka ny zavatra tokony hatao ato amin'ity tanàna amoron-dranomasina ity. Avy amin'ireo trano marevaka marevaka hatrany amin'ny bara fanidinana hip, Ny renivohitr'i Danemark dia momba ny zavatra rehetra fotsiny.
Hisaraka mandritra ny fotoana kelikely ny fiaran-dalamby eo anelanelan'ny tanàna roa. Ny fitsangatsanganana dia miakatra enina ora, ka aleo mitady fialamboly. Izay voalaza, Modern ny fiaran-dalamby ary manana fialana maromaro mba hahafahanao miverina sy miala sasatra amin'ny fiadanana.
5. Sarintany misy lalana: Lamasinina avy any Zurich mankany Bern
Raha mba te handeha amin'ny Alps ianao, tsy hahita fototra tsara kokoa hitrandrahana ianao afa-tsy amin'i Zurich sy Bern. Samy mipetraka ao amin'ny firenena Soisa, ireo tanàna ireo dia adiny iray monja amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Na dia mety tsy tsapanao izany, I Bern dia renivohitr'i Soisa, tsy amin'ireo tanàna malaza indrindra toa an'i Genève na Zurich. Ny mponina dia mirehareha vahoaka iray tapitrisa mahery ary feno hatsarana mahafinaritra.
Mandritra izany fotoana izany, Zurich dia malaza amin'ny banky – na dia hahita ny fidiranao amin'ny toerana amoron-dranomasina aza ianao fa tsy amin'ny tranobeny. Nipetraka hatry ny ela ny tanàna 2,000 taona ary nahitana olona saika dimy hetsy.
Ny fiaran-dalamby dia matetika ary ampiasazin'ny lamasinina maoderina, na dia tsy manam-potoana firy hanadihady izany ianao amin'ny dia fohy fohy. Mifandray amin'ny WiFi maimaim-poana, hijery kely, ary rehefa vita ianao – ny lalana tsara!
Miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka manerana ny ankamaroan'i Eoropa, tsy maintsy mitady lalana tianao ianao. Na mitady safidy eo an-toerana ianao na mikasa ny fitsangantsanganana transcontinental amin'ny androm-piainany, mifikitra amin'ny Save A Train hahitana ireo safidy tsara indrindra azo atao amin'ny tapakila azo amidy amin'ny vidiny mora indrindra.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Eran-tany momba ny làlan-dalamby lalamby any Europe” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-train-route-maps-guide%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)